Wholesale Degdeg ah oo deg deg ah oo jilicsan oo jilicsan ayaa soo gaabiyo dharka gaagaaban ee miskaarka xeebta Soosaarka iyo Warshadaha | Stamgon
Guddi deg-deg ah oo raaxo leh ayaa gaagaaban dharka haweenka ee xeebta
Nambarka Model: SSDKR190807-1
Sharraxaadda: Gawaarida ragga ee xeebta
Ist Isku-darka dhexda oo leh xargaha xargaha ah oo fidsan iyo jilicsan iyo baalal bir ah.
Quality Tayo aad u wanaagsan: Qalabka dharka ayaa ah 100% maqaarka midabka miro dhalida ah ee polyester, jilicsan, iyo neefsashada, hubinta in aad si buuxda ugu raaxeysan doonto xirida. Xusuusin: Cabbirka caadiga ah: S, M, L, XL, XXL.
☆ Labo jeeb oo hore iyo jeebka dhinaceeda weyn, oo ku habboon in waxyaabo badan gudaha la dhigo.
S Xeebtan xeebta-gaaban waxay ku siinaysaa dareen gaar ah oo ku saabsan raaxada iyo farxadda fasaxa, kalmoonka, safarka xeebta ciid, dabbaasha dabbaasha iyo howlo kala duwan oo biyo ah.
Magaca sheyga: Guddi deg-deg ah oo raaxo leh ayaa gaagaaban dharka haweenka ee xeebta
Qalabka: 100% polyester
Ragga - gaaban oo xeebta leh Adeegga OEM ODM
Qaabka: Moodada, Neefta, Kuwa kale.
Midab: Buluug, jaale, casaan
Lable & Logo Astaan ​​la soo qaatay oo la aqbali karo
Alaabada saamiyada: 15 maalmood; OEM / ODM: 30-50 maalmood ka dib markii muunado la oggolaaday.
Hore: Gudi deg deg ah oo jilicsan oo jilicsan ayaa soo koobaya dharka dharka xayawaanka ee daabacan
Xiga: Guddi deg deg ah oo jilicsan oo jilicsan ayaa gaagaaban oo gaaban oo daabacan Moms xeebta gaaban
Dukaammada Xeebta Xeebta
Dukaammada Xeebta Macaamiisha
Dukaamada Mens Beach
Gudi deg deg ah oo jilicsan oo jilicsan ragga ayaa la daabacay ...
Guddi deg deg ah oo raaxo leh ayaa gaagaaban daabacaad ...